Kunwa uswa, Aluminum angazvidzvisa Paper, kubvarura Tape, Transfer Paperboard - Fancyco
Pla rudzi kurongedza zvinhu kubva chirimwa. Zvokudya Its kuchengeteka kupfuura zvetsika epurasitiki kuonana. Kwakajairika mapurasitiki kushandisa kushanda kunokwanisika kana zvigadzirwa waivako, 100% biodegradable uye kusiya. Kana iri nhumbi extrusion pehata iridzwe firimu, polylactic iine acid nebwe kunogona kuva vakakwana. Izvi haisi zvinhu kuchinja, kutipawo vanoshandisa chiitiko nani chigadzirwa, kwete chete muna machine kwacho nokuda yakaderera choutsi. Pashure akasiya panguva imwecheteyo, uyewo kuteerera kudzivirira zvakatipoteredza.
Tine yakazara-siyana Zvakaitika aina mbishi zvokuvakisa fodya, kusanganisira Aluminum foil bepa, Acetate setambo yokukwevesa, BOPP firimu, Plug vachivhara mapepa nokuda Sefa tsvimbo, Cigarette wrapping bepa, Rwomumwoyo puranga bhodhi kuti mudzanga chiputiriso, ritodogore tepi, uye Tipping bepa.
The chinetso mapurasitiki: 1,6 straws pamunhu pa dayAmericans vanoshandisa zvokuti putira vakapoteredza pasi 2,5 nguva nokusingaperi zuva. Vazhinji vavo mapurasitiki straws.Ecosystem PollutionBecause vanenge saka lightweight, straws kuridza mumvura nzira, apo vanoenda mugungwa uye kukuvadza wildlife.Not Recyclable Non-biodegradablePlastic straws hazvigoni zvishandiswezve. Havazivi anoora uye kusvibisa nyika yedu uye oceans.It wedu NGUVA Eco! Isu nyanzvi biodegradable diposables, kusanganisira nzimbe bagasse tablewares, wheet mashanga zvokudya midziyo yakadai mukombe, clamshell, ndiro, tireyi, ndiro zvichingodaro uye zvimwe kuraswa zvinhu zvinoshandiswa mumaresitorendi, pikiniki uye mapati.
Fancyco akawanikwa muna 2004. kambani yedu yakava yendarama nokutengesa muna Alibaba kwemakore 14. Raiva rinokosha yakachinja 2005 izvo tine fekitari kwedu. Muna 2015 Fancyco vakabudirira akapinda Nigeria uye Uganda pamusika uye akamisa No.1 muchiso pamusoro chinamirwa bepa uye utsanana zvigadzirwa munyika idzi. Zvino tiri nyanzvi chiputiriso uye zvaidhindwa.